Tilmaamaha Isticmaalaha LMDE ee wanaagsan | Laga soo bilaabo Linux
Tilmaamaha Isticmaalaha LMDE aad u fiican
Akhrinta RSS-kayga maanta waxaan ogaaday in dhowr baloogyo ay ka dhawaajiyeen hage loogu talagalay adeegsadayaasha LMDE kaas oo laga soo tarjumay af Talyaani ilaa Ingiriis, iyadoo laga helo labada afba.
Waan isha ku hayey oo waxay umuuqataa mid quruxsan, oo lagu daray waa wax aad u fudud in la fahmo. Waxaa abuuray Giorgio beltrammi (waxaa loo yaqaan borgio3) waayo Beesha Talyaani Linux Mint oo waxaad ka heli kartaa khadkan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » GNU / Linux » Tilmaamaha Isticmaalaha LMDE aad u fiican
Man inuu kujiro Talyaani ma ahan wax adag in la fahmo, laakiin waxay u socotaa in hagaha LMDE ...
hage u ah LMDE ... Waxaan u maleynayaa kaliya oligophrenic inay tahay inuu isticmaalo
fiiri inaad kahadasho daaqadaha ...
Kuwa naga mid ah ee booqda boggan iyo kuwii hore ee elav ee hagahaas ah looma baahna. Waan qaldanahay
Ku jawaab Atreuskorb
Sida loogu hagaajiyo waxqabadkaaga Devilspie
Text Sublime 2, tifaftire runtii sumacad sare